Gabar Muslimad ah oo xadgudub daran loogu geystay dalka Belgium… – Hagaag.com
Gabar Muslimad ah oo xadgudub daran loogu geystay dalka Belgium…
Posted on 7 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Booliska Belgium ayaa malintii Jimcaha xirey laba qof oo looga shakiyay in ay ku xadgudbeen gabar Muslimad ah af ahaan iyo jir ahaanba koonfurta dalkaasi, halkaasi oo ay ku garaaceen xijaabkana ka jeexeen kuna sawireen jirkeeda calaamada saliibka ama Masiixiga.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee rasmiga ah “Belga” in xeer ilaaliyaha guud ee magaalada Charleroi ku dhawaaqay qabashada laba qof oo lagu eedeeyey weerarkaasi, laakin iyagu waxay beeniyeen eedeymaha loo soo jeediyey.
Wakaalada wararka ayaa ku dartay in xeer ilaalintu ay wado baaritaanka dhacdadan oo la kulantay gabar 19 jir ah caay iyo xijaabka iyo dharkeeda oo laga jeexey laguna sawiray jirkeeda calaamada saliibka iyaga oo adeegsanaya qalab wax jara.
Horaantii Jimcihii ayaa xubno ka mid ah 50 ururada bulshada rayidka ah isugu soo baxeen qasriga cadaalada ee magaalada Brussels iyaga oo ka dhiidhiyey waxa dhacay, waxayna gabadhha iyo qoyskeeda u muujiyeen midnimo iyo inay garab taagan yihiin.
Dalalka Yurub ayaa waxaa ku soo badanaya weerarada cunsurnimo oo ka dhanka ah muwaadiniin iyo muhaajiriin Muslim ah iyo Afrikaanba, xadgudubka ayaa isugu jira mid af ah iyo mid jirreed iyo sidoo kale beegsashada guryaha, masaajida, xarumaha bulshada oo la qaribo ama la gubo ama lagu qoro qoraallo aflagaado derbiyada.